ခုတ်ပြောင်း ရှင်းလင်းကြပါစို့ | မေတ္တာရိပ်
← နှစ်သစ် မင်္ဂလာ ၂၀၁၁
မြေစောင့်နတ်သား ပြဿနာ →
ခုတ်ပြောင်း ရှင်းလင်းကြပါစို့	Posted on April 24, 2011	by mettayate “ခုတ်ပြောင်း ရှင်းလင်းကြပါစို့”
ရေးသားပြီးတည့် . . . ။
This entry was posted in ဆုံးမသြ၀ါဒများ. Bookmark the permalink.	← နှစ်သစ် မင်္ဂလာ ၂၀၁၁